Showing १११-१२० of ३९४ items.
बिग्रियो सलमान र कबीरको सम्बन्ध
'बजरंगी भाईजान' का निर्देशक कबीर खान र बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको सम्बन्ध विग्रिएको खबर बाहिर आएकोे छ । पछिल्लो पटक सलमानले कबीरको फिल्म 'ट्यूबलाइट' मा काम गरेका थिए । यही फिल्मका कारण यी दुईको सम्बन्ध ठिकठाक नभएको बताइएको छ । कबीर खान बलिउडका सफल फिल्म निर्देशकमा चिनिन्छन् । उनले सलमानसँग मिलेर 'बजरंगी भाईजान', 'एक था टाइगर', 'ट्यूबलाइट' फिल्म बनाए । फिल्मी रिलेशनसँगै यी दुई पर्सनल लाइफमा पनि निकै मिल्ने साथी हुन् । तर, हालैमात्र बाहिरिएको सलमान र कबीरको सम्बन्ध विग्रिएको खबरले बलिउडमा ठूलै तरंग उत्पन्न गरेको छ । यी दुईको बीच मनमुटावको कारण फिल्म 'ट्यूबलाइट' मा भएको वैचारिक मतभेद ह
प्रकाशित मितिः माघ २०, २०७४
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउँदै
काठमाडौँ/ बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ५ मार्चमा काठमाडौं आउँदै छिन् । उनका साथमा अभिनेता इरफान खान पनि हुनेछन् । दीपिका र इरफानको नेपाल फिल्म सुटिङका लागि आउन लागेको हो । विशाल भारद्वाजले निर्देशन गर्ने फिल्मका लागि उनीहरू नेपाल आउन लागेका हुन् । फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, पटकथा लेखकजस्ता धेरै परिचय बनाएका भारद्वाजले ट्विटमार्फत् खुलासा गरेका छन्, ‘यो नयाँ विषयमा काम गर्ने कुराले उत्साहित छु ।’ उनले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म नेपालबाटै सुरु हुनेछ । तर, अहिलेसम्म फिल्मको नाम भने तय भइसकेको छैन ।
कैटरीनाको यस्तो बानीदेखि रिस उठ्छ आलिया भट्टलाई
काठमाडौं/बलिउड फिल्म इण्डष्ट्रीमा अभिनेत्रीद्वय आलिया भट्ट र कैटरीना कैफलाई एक–अर्काका असल साथीका रुपमा लिइन्छ । फुर्सदको समयमा उनीहरु एकसाथ शारिरीक व्यायाम जीमदेखि पार्टीसम्म गर्छन् । हालै यी दुई अभिनेत्री एकसाथ अर्की अभिनेत्री नेहा धूपियाको टीभी शोमा पनि पुगेका छन् । टिभी शोमा आलिया भट्टले कैटरीना कैफको सबैभन्दा नराम्रो बानीका बारेमा खुलासा गरेकी छिन् । शोमा खेलाइने एक खेलका दौरान नेहा धूपियाले कैटरीनाको नराम्रो कुनै एक बानीका बारेमा प्रश्न राख्दा आलियाले भनिन्, ‘‘कैटरीना कैफको सबैभन्दा नराम्रो बानी उनी आफ्नो योजनामा अडिग हुन नसक्नु हो ।’’ कैटरीना कैफले सधैँ आफ्ना योजनाहरु परिवर्तन गरिरहने
प्रकाशित मितिः माघ १९, २०७४
बलिउड अभिनेत्री जिया खानको आत्महत्या प्रकरणले लियाे नयाँ मोड
काठमाडौं/ बलिउड अभिनेत्री जिया खानको आत्महत्या प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । जिया खानलाई आत्महत्याका लागि उक्साएको आरोपमा अदालतले अभिनेता सूरज पञ्चोलीविरुद्ध आरोप तय गरेको छ । न्यायाधिश केडी शिरभाटेले भारतीय कानुनको धारा ३०६ अन्तरगत २७ वर्षीय अभिनेताविरुद्ध आरोप गरेका हुन् । तर अभिनेता सूरज पञ्चोलीले आफु निर्दोष भएको दाबी गरिरहेका छन् । पञ्चोलीका कानुन व्यवसायी प्रशान्त पाटिलले भने, ‘‘सूरजले आफुलाई निर्दोष बताएका छन् र प्रत्यक्षदर्शी (गवाह) को बयान १४ फेब्रुअरीबाट सुरू हुनेछ ।’’ आरोप पत्रका अनुसार अभिनेत्री जिया खान ३ जून २०१३ मा आफ्नै घरमा फाँसीमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनी दु
तापसीलाई हुन्छ ज्याकलीनसँग जलन !
काठमाडौं/ बलिउडमा स्थान बनाउन सफल अभिनेत्री तापसी पन्नू अत्यन्तै चर्चामा रहन्छिन् । तापसी फिल्मका माधयमबाट दर्शकको मन जित्दै गएकी पनि छिन् । उनी पछिल्लो समय वरुण धवनका साथ फिल्म ‘जुडवा २’ मा देखिएकी थिइन् । वरुण धवनको दोहोरो भूमिका रहेको उक्त फिल्म सुपरहिट भएको थियो । फिल्ममा तापसीका साथ ज्याकलिन फर्नाडिज पनि थिइन् । तर तापसीले रिएलिटी शो इन्टरटेनमेन्टका दौरान सोधिएको प्रश्नमा आफुलाई कहिल्यै पनि ज्याकलिनसँग काम गर्न मन नलागेको प्रतिक्रिया दिइन् । तापसी भनिन्, ‘‘मलाई ज्याकलिनको टोन्ड बडीदेखि जलन हुन्छ ।’’ यसअघि ‘जुडवा २’ को प्रमोशनका क्रममा तापसी र ज्याकलिनबीच वरुण धवनको विषयलाई लिएर मनमुटाव
रणवीर सिँहको खुलासा– कुनै समय तीन–तीन प्रेमिका थिए
काठमाडौं/ हक्की स्वाभावका बलिउड अभिनेता रणवीर सिँह बेलाबेलामा विभिन्न बयानबाजी गरेर चर्चामा आइरहन्छन् । रणवीर आफ्नो सम्बन्धका बारेमा खुलेरै सबैलाई स्पष्ट पारिदिन्छन् । उनी प्रायःजसो संकेतमै भए पनि प्रेम सम्बन्धका बारेमा खुलासा गरिदिन्छन् । तिन रणवीर सिँहको एक बयान पछिल्ला समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । बलिउड हंगामाका अनुसार रणवीरले १४ वर्षकै उमेरमा एकसाथ तीनवटा प्रेमिका रहेको खुलासा गरेर चर्चा बटुलिरहेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘‘म सधैँ नै युवतीहरुसँग राम्रो छु । एकपटक म परिवारका सदस्यका साथ अमेरिका छुट्टी मनाउन गएको थिएँ । फर्किदा आफुलाई दुब्लो र लामो भएको जस्तो महशुस गरे । त्यसपछि मैले
‘मेरो सेटमा महिलामाथि कसैले दुर्व्यवहार गर्न सक्दैनन्’- शाहरुख खान
सुपरस्टार शाहरुख खानले आफ्नो फिल्मको सुटिङ सेटमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्न कसैको हिम्मत नहुने बताएका छन् । बीबीसीको हार्डटक कार्यक्रममा बलिउडमा लैगिंक समानता र भारतमा सांस्कृतिक भिन्नताका बारेमा कुरा गर्दै उनले भने- ‘जब म फिल्म निर्माण गरिरहेको हुन्छ वा फिल्ममा काम गरिरहेको हुन्छु तब हामी महिलामाथिको व्यवहारलाई लिएर स्पष्ट हुन्छौं, सबैभन्दा सानो कुरामा पनि महिलालाई ध्यान दिन्छौं । जस्तै, फिल्मको टाइटलमा उनीहरुको नाम पहिला आउँछ, यद्यपी यसले हुने त केही होइन तर उनीहरुप्रति एउटा सम्मान हो।’ उनले अगाडि भने, ‘समानता ल्याउन सानोभन्दा सानो कुराले पनि अर्थ राख्छ । हेर्नुस् त हामीले आफूलाई कति सानो
प्रकाशित मितिः माघ १८, २०७४
चलचित्र ‘पद्मावत’ मलेसियामा पनि प्रतिबन्ध
लामो समयको विवादपछि प्रदर्शनमा आएको वलिउड चलचित्र ‘पद्मावत’ ले भारत बाहेकका देशमा पनि प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको छ । मलेसियामा पनि यो चलचित्र प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको हो । चलचित्रका दृश्यलाई लिएर मलेसियामा रहेका मुसलमानहरुले आपत्ति जनाउन सक्ने र विरोध गर्नसक्ने संभावना भएका कारण मलेसियन सेन्सर बोर्डले चलचित्र प्रदर्शनको अनुमति दिएको छैन । मलेसियाको राष्ट्रिय चलचित्र सेन्सरसिप बोर्ड (एलपीएफ)का अनुसार यस चलचित्रको विषय मलेसियन नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्नेछ । मलेसियामा अधिकांश मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु बसोवास गर्छन् । सुफी कवि मलिक मोहम्मद जायसीद्वारा १५४० मा रचित महाकाव्य पद्मावत मा
ऐश्वर्याले कस्तो फिल्म खेल्दैछिन् ? फिल्म खेलेबापत निर्मातालाई मागिन १० करोड
केही बर्षको विश्रामपछि बलिउडमा फर्किएकी ऐश्वर्या राय कम तर राम्रो फिल्ममा केन्द्रित हुन खोजिरहेकी छिन् । विवाह गरेपछि छोरी जन्माएर घरमै बसेकी ऐश्वर्या बलिउडमा फर्किएसँगै फन्ने खाँ मा सक्रिय भईन् । उनको फिल्म आगामी इदमा रिलिज हुँदैछ, जसको टक्कर सलमानको रेस ३ सँग हुनेछ । यसपछि ऐश्वर्यालार्य लागातार फिल्मको प्रस्ताव आइरहेको छ । हालै उनलाई नर्गिस अभिनित फिल्म रात और दिन को रिमेकका लागि प्रस्ताव आएको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले चर्चा गरे अनुसार स्क्रिप्टअनुसार फिल्ममा उनको दोहोरो भुमिका छ । तर, जब परिश्रमिकको कुरा उठ्यो तब उनले १० करोड रुपैयाँ माग गरिन् । उनको रेट सुनेर सबै चकित परे । यति
कराडौंका मालिक शत्रुघ्नले छोरी सोनाक्षी सिन्हाबाट किन लिए ऋण ?
काठमाडौं/ बलिउड स्टार किड्स निकै चर्चामा हुनेगर्छन् । स्टारका अधिकांश छोराछोरी यस्ता छन्, जो आफ्नो करिययर फिल्ममा बनाउन चाहान्छन् । यस्तै एक स्टार किड्स हुन् सोनाक्षी सिन्हा । अभिनेताबाट नेता बनेका शत्रुघ्न सिन्हाकी छोरी सोनाक्षीको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । उनी शत्रुघ्नकी छोरी भन्दा बढी आफ्नै नामबाट चिनिन्छिन् । सफलताको मामलामा अब सोनाक्षी पति भन्दा कम छैनन् । उनका जबरजस्छ फ्यान फलोइङ छ । यती मात्रै होइन पिता शत्रुघ्न छोरीसँग ऋण समेत लिन्छन् । यो थाहा पाउँदा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । १३१ करोडका मालिक शत्रुघ्न १३१ करोडका मालिक हुन् । उनी भारतीय जनता पार्टीका सांसद समेत हुन् ।
प्रकाशित मितिः माघ १६, २०७४